yeti airlines – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > yeti airlines
माउन्टेन फ्लाइट अफर : एउटा टिकट किन्दा अर्को सित्तैमा, कुनको कति छ मूल्य ?
चाणक्य पोष्टअशोज ६, २०७८
माउन्टेन फ्लाइट अफर : एउटा टिकट किन्दा अर्को सित्तैमा, कुनको कति छ मूल्य ? चाणक्य पोष्ट प्रकाशित : 2:20 pm, बुधबार, असोज ६, २०७८ काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित भएको मुलुकको पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) पुनः सुरु भएको छ । कोभिडको जोखिम कम भएसँगै वायुसेवा कम्पनीले पर्वतीय उडान सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सर्वोच्च शिखर…
यती यअरलाइन्स एटीआर युगमा प्रवेश, जहाज थपेर गन्तव्य विस्तार गर्दै
चाणक्य पोष्टअशोज ५, २०७८
यती यअरलाइन्स एटीआर युगमा प्रवेश, जहाज थपेर गन्तव्य विस्तार गर्दै चाणक्य पोष्ट प्रकाशित : 3:01 pm, मंगलबार, असोज ५, २०७८ काठमाडौं । आफ्नो स्थापनाको २३ वर्ष पूरा गरेको ठूलो हवाई सञ्जाल भएको प्रतिस्पर्धी वायुसेवा कम्पनी यती एयरलाइन्सले जहाज थपेर नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ । सन् १९९८ सेप्टेम्बर २१ बाट पहिलो…
बसभन्दा जहाजभाडा सस्तो, विराटनगरको दुईतर्फी भाडा जम्मा २ हजार, अन्य गन्तव्यको कति ?
चाणक्य पोष्टभदौ ६, २०७८
बसभन्दा जहाजभाडा सस्तो, विराटनगरको दुईतर्फी भाडा जम्मा २ हजार, अन्य गन्तव्यको कति ? चाणक्य पोष्ट प्रकाशित : 11:19 am, आइतबार, भदौ ६, २०७८ काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक यती एयरलाइन्सले यात्रुलाई आकर्षित गर्न ‘जनै पूर्णिमा स्पेशल अफर’ ल्याएको छ । यसअघि पनि विभिन्न अफर ल्याएको कम्पनीले जनै पूर्णिमालाई लक्षित गर्दै ‘स्पेशल अफर’ ल्याएको हो…